Darpan Nepal – बलात्कार, समस्या पुरुषको मानसिकतामा हो, लिंगको दोष होइनः शशी बस्नेत !
बलात्कार, समस्या पुरुषको मानसिकतामा हो, लिंगको दोष होइनः शशी बस्नेत !
काठमाडाैँ । पछिल्लो समय देशभर बलात्कारका घटना बढीरहेका छन यससँगै पीडकलार्इ मृत्युदण्डको सजाँय दिनुपर्ने अावज चर्काे रूपमा उठिरहेकाे छ । बलत्कारीलार्इ मृत्युदण्ड वा फाँसीकै सजाँय दिएर मात्र समस्याकाे समाधान नहुने तर्क राख्ने महिलाहरू पनि छन । महिला अधिकारकै पक्षामा लामाे समयदेखि अावाज उठाउँदै अाएकी अधिकारकर्मी अधिवक्ता शशी बस्नेत बलात्कारीलाई फाँसी दिने या नपुंसक बनाउने कानुनको विपक्षामा छिन ।
शशी बस्नेत, अधिवक्ता
महिला खबर डटकमकी सम्पादक लोग्शरी कुँवरसँग उनी भन्छिन, ‘अपराधीलाई सजायका साथै पीडितलाई क्षतिपूर्ति बढाउनु पर्छ । झन्झटिलो न्याय प्रणालीको अन्त्य गरी बलात्कृत महिलाहरूको तत्काल उपचार, क्षतिपूर्ति र पुनस्र्थापनाको सवालमा राज्य गम्भीर हुने हो भने पीडितले न्याय पाएको अनुभूति गर्छन् ।’ प्रहरीले मुद्दा दर्ता नै नगरिदिने, पीडितले उपचार र क्षतिपुर्ति समेत नपाएपछि आक्रोश बढ्दै जाँदा फाँसीको विषय उठेको उनको भनाइ छ ।
–बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड देऊ
घटना १ नुवाकोटकी ६ महिनाकी बालिका । सधैंजसो घरको आँगनमा राखिएको बालिकाको कोक्रो हल्लाइदिने छिमेकी दाइले आमा तरकारी किन्न गएको बेला आफ्नो लिंग बालिकाको योनिमा रगडे । योनिमा लिंग नघुसेपछि मुखमा कोचे । आमा फर्किदा छोरी रक्ताम्मे भेटिइन् ।
बालिकाकी आमालाई आफ्नो कोठासँगै डेरामा बस्ने छिमेकी दिनेश चौधरी भन्ने मोरङका विश्वराम रनप्रति शंका लाग्यो । उनले प्रहरीलाई त्यही बयान दिइन् । विश्वरामले छोरी अमृता माथी पटक–पटक यौन दुव्र्यवहार गर्दै आएको कुरा समेत खोलिन् ।
मेनुका थापा, अध्यक्ष, रक्षा नेपाल
Previous Postचितवनमा बर्ड फ्लुको आशंका, एकै खोरमा ३ हजार ७ सय कुखुरा मरे Next Postओमन बाट एक नेपाली चेलीको गुहार, उनि निकै ठुलो संकटमा परेकोले सबैले शेयर गरी उद्धारको लागि सहयोग गरौँ ! (लाइभ भिडियो)